Ikhabhinethi ye-2 e-Elm Lake Resort
Iikhabhini zakhiwe kwindawo yam yenkampu ebizwa ngokuba yi-Elm Lake Resort engase-Elm Lake. Ngoko kukho imisebenzi emininzi yamanzi yokwenza ngakumbi ehlotyeni. Indawo yokutyela kunye nebha ivulwa ngolwesine ukuya ngeeCawe.
Ukuhamba okufutshane ukuya kuFrederick. Ezinye iidolophu ezikufutshane yiForbes neEllendale; Ukuba ufuna ukuthenga ezinye izinto kwaye ujonge ezinye izinto onokuzenza. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yokuba indawo yendawo ilungile kubantu abafuna iholide yokuphumla.
Kukho iwele eli-1 ngaphezulu kwebhedi egcwele iBunk kunye ne-Twin XL Bunk Bed ngaphakathi kwendlwana. Akukho gumbi lokuhlambela ngaphakathi, ngoko unokusebenzisa indawo yokuhlambela ngaphakathi kwibala lenkampu. Yeyona ndlu yokulala ifanelekileyo kwiintsapho, iqela lezihlobo, abazingeli abafuna ukonwabela ngaphandle kunye nechibi.
Ixabiso ngobusuku kwikhabhathi nganye libandakanya kuphela umrhumo wenkonzo ye-AirBnB. Ezinye iirhafu AKUQUKWE kwixabiso.
Uluntu lwasechibini luncinci ngoko abantu bamkelekile.
Ibhedi ayifakwanga, ngoko ke kufuneka uze neyakho. Ukuba awunayo nayiphi na, ungaqhakamshelana nam kwangethuba kwaye ucele enye ngentlawulo eyongezelelweyo.